★မြန်မာ့အလင်း★: အားသန်ထားပါ၊ မာန်တင်းထားပါ၊ ဒို့အောင်မြင်မှာပါ
အမျိုးပြောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ စာအုပ်မှ စပိုဒ်လေးတစ်ခုကို ဖြန့်ဝေလိုပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ
မွတ်ဆလင်တို့ အခွင့်ရလျှင်ရသလို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာတမျိုးသားလုံးအပေါ် နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး ကြောခဲ့ကြပုံအချို့ကို ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိလက ဇတ်လမ်းတွေအမြောက်အမြားရှိပေမယ့် လူတကာသိကြတဲ့ နိုင်ငံကျော် ကိစ္စတွေကိုပဲ ပြန်လည်တင်ပြလိုပါတယ်။
၁။ မြန်မာဦးစွန်းဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့ နန်းမြို့ရိုးထဲမှာ ဗလီဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့လည် အချက်အခြာကျတဲ့ ဆူးလေဘုရားရဲ့ ဂေါပက မြေကို အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ၄င်းတို့က ရအောင်ယူပြီးတော့ ဆူးလေဘုရားနဲ့အပြိုင် ပေ၁၀၀ ခန့်အတွင်းမှာ ဗလီကြီးဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
၃။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အဂ္ဂမဟာပဏိတဘွဲ့ ဆက်ကပ်ခံရပြီး တွဲဖြူရထားတစ်တွဲကို အလိုရှိသလို အချိန်ခါမရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆက်ကပ်ခံရတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မပုတ်ခတ်ပဲနဲ့ နွားသားမစားကြဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အလှူခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို မွတ်ဆလင်တို့ အားများတဲ့ ပျော်ဖွယ်၊ ရမည်းသင်း၊ ပျဉ်းမနား တို့မှာ ခဲနဲ့ပေါက်ပြီး စော်ကားခဲ့ကြပါတယ်။
၄။ ပါလီမန်ခေတ်ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ဓမ္မာရုံရှိသလို သူတို့ကိုလည်း တက္ကသိုလ် နယ်မြေမှာ မြေနေရာပေးပါ။ ဗလီတည်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုပြီး မွတ်ဆလင်ဝန်ကြီးနှစ်ကောင် (ဦးရာရှစ်၊ ဦးခင်မောင်လတ်)တို့က တောင်းဆိုပြီး ကျပ်ငွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ဗလီကြီးဟိန်းနေအောင်ဆောက်ဖို့ ကြက်ဆင်ဖဲထီသူဌေး မဒါးကုလားက တာဝန်ယူပြီး အရေးဆိုခဲ့ပါတယ်။ (တောသားနှစ်ယောက် မှတ်ချက် ။ ။ မွတ်ဆလင် ဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေးဟာ မြန်မာပြည်အတွက် လုပ်ရင်း ကျဆုံးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အာဇာနည် ၉ ဦးမှ မွတ်ဆလင် ၂ ကောင်ကို ဖြုတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အာဇာနည် ၇ ယောက်အဖြစ် ပြောကြပါရန်။ အစိုးရအနေဖြင့် မပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် ကျနော်တို့ တွေက ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်)
၅။ ပါလီမန်မှာ ဥပဒေသစ်တစ်ခု ပြဌန်းဖို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ၀က်သားမြင်ရင် ဟာရမ်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀က်သားစားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဈေးမှ ၀က်သားဝယ်ရင် လုံလုံခြုံခြုံထုတ်ယူကြဖို့၊ လူမြင်အောင် တွဲလွဲဆွဲသွားရင် တရားဥပဒေနဲ့ တားမြစ်ပေးဖို့ အရေးဆိုခဲ့ပါတယ်။
၆။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီ စစ်ကြိုခေတ်က ကုလားမောလ၀ီ ရွှေဖီဆိုသူက ‘မော်လ၀ီ၊ ယောဂီစာတမ်း’ ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ မြန်မာတို့ကို ပုတ်ခတ်ရေးသားခဲ့လို့ ကုလားမြန်မာ အဓိကုရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၇။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်က ခရမ်းမြို့မှာ တမီးလ် (ကုလယ်ကုလား)တွေက ဘုရားပွဲလှည့်တာ စနေဆွမ်းလောင်းမှာ ရှိတဲ့ ဗလီရှေ့လမ်းကနေ ဖြတ်ကျော်မလှည့်ရဘူးဆိုပြီး အဲဒီဘုရားလှည့်ပွဲကို ၀င်ရိုက်ပါတယ်။ တမီးလ်တွေပင့်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓကျောက်ဆင်းတုရုပ်ပွားတော် ဦးခေါင်းကျိုးပြတ် သွားခဲ့လို့ အဲဒီတုံးက အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရန် တဲတဲလေးလိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုံန်းက နာယက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးက မွတ်ဆလင်ဖြစ်လို့ သူတို့ကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ဘယ်လောက်များ ကျယ်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
၈။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသူတွေကို သဘောရှိ စိတ်တိုင်းကျ ယူကျပေမယ့် သူတို့ကပြားအမျိုးသမီး တစ်ဦးဦးကို မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က ယူလျှင် ဘာသဖျက်ဆီးမှုနဲ့ တရားစွဲခံရပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ ခေတ်အထိပါပဲ။
၉။ ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပ တည်စက မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေဟာ မြို့စွန်တနေရာမှာ တစ်စုတဝေးတည်း နေရာချထားခြင်း ခံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့က သက်ဆိုင်ရာ အဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငွေနဲ့ ကြေးနဲ့လိုက်ပြီး အချက်အခြာနေရာမှာ ဗလီတည်ဖို့ စတင်ဆောက်ခဲ့ကျလို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ပဲဆိုးပါ . . . . ဒေါသမထွက်နဲ့
ကုလားတွေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကိုလာပြီး အနိုင်ကျင့်၊ ဆော်ကားတဲ့လုပ်ရပ်ကို ဒေါသထွက်ကြမှာပါ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း ဒေါသထွက်ပါတယ်။ ဒီလိုဒေါသထွက်လဲ ဘာမှလဲအကျိုးမထူးပါဘူး။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ ကုလားမတွေနဲ့ ကုလားတွေကို ပလီက ဆုငွေပေးကြောင်း အထောက်အထားတွေနဲ့ ရေးတုံးက လိမ်လို့မရတော့လို့ သူတို့က ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလို မတရားလုပ်မှုအတွက် ရှက်ရမှန်းကို သူတို့က မသိပါဘူး။ လူလိုမရှက်တတ်တဲ့ ကုလားတွေကို ကျနော်တို့ ဒေါသထွက်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ။ ဒေါသထွက်ရတာ မိမိစိတ်ပဲ ပင်ပန်းပါတယ်။ အဲဒီအစား လက်တွေ့ကျကျ အလုပ်တစ်ခုကို အချိန်လေးပေးပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၇၈၆ စာလုံးမြင်တိုင်း၊ မွတ်ဆလင်ဆိုတဲ့ အသံကြားတိုင်း ၊ ပလီဆရာတွေကိုမြင်တိုင်း၊ ရန်ကုန်မှာ ပလီကနေ ခွေးအူသံကြီးကို ကြားရတိုင်း စိတ်ထဲမှာ “ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒပျောက်ဖို့ဆိုတာ ငါကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်မှဖြစ်မယ်။ ဒေါသထွက်လို့အကျိုးမရှိဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို မိမိစိတ်ထဲမှာ ပြန်ပြောပါ။ ပြီးရင် အမြစ်ကနေဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတပွင့်ပါဝင်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။
ယခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့နဲ့ အတူတူ ၃ ယောက် လောက်က စွဲစွဲမြဲမြဲနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ဖြုတ်ရေးကို လုပ်မယ့်ဟန်ရှိပါတယ်။ ၃ ယောက်ဆိုတော့ သိပ်ကို နည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာ မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ပြုတ်ရေး အစီအစဉ်ကြီးရေးထားပါလျက်နဲ့ ချပြဖို့ လက်တွန့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့။ ဘယ်အလုပ်မှ အစမှာ အင်တိုက် အားတိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကားစုတ်ကြီးကို တွန်းပြီး စက်နှိုးရသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်ချင်ရင် ခွန်အားစိုက်ထုတ်ရပါမယ်။ မိမိတို့ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိဆိုရင် လှုပ်ရှားတဲ့သူက အရမ်းကိုနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအင်အားများလာအောင် ဘယ်လို စည်းလုံး၊ လှုံ့ဆော်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ စဉ်းစားမိတာကတော့ ဘလော့တွေက ဆီပုံးတွေမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာ အကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးတွေကို လူတွေသိအောင် ရေးသွားဖို့လိုပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ကုလားတွေရဲ့ အန္တရယ်ကို ဆန့်ကျင်ရာမှာ ပါဝင်လာအောင် လူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ (ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားထားတာ ရှိရင် ကော်မန့်မှာ ပြောပေးပါ)
အွန်လိုင်းမှ မိမိတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အပြင်မှ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း စည်းရုံးစေချင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ၃ ယောက်ပဲ ရှိပေမယ့်။ လူတစ်ယောက်ကနေ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ၂ ယောက်ကို ရအောင် ရည်မှန်းချက်ထားပြီး စည်းရုံးစေချင်ပါတယ်။ အဲလိုစည်းရုံးရင် ယခု ၃ ယောက် နဲ့ နောက်ထပ်ရလာတဲ့ ၆ ယောက်နဲ့ ထပ်ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း ၉ ယောက် ဖြစ်သွားမှာပါ။ စဉ်စားပါ.. အဲလို စည်းလုံးထားတဲ့ ၆ ယောက်ကို နောက်ထပ် တစ်ယောကို ၂ ယောက်ဆီ ထပ်ပြီး စည်းလုံးခိုင်းပါ။ ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ? စုစုပေါင်း ၂၁ ယောက်ဖြစ်သွားမယ်။ အဲလို ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့်စည်းလုံးသွားရင် တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်ဆိုတာ ခဏလေး ဖြစ်သွားမှာပါ။ ထပ်ပြီးသတိပေးခြင်တာက. . . စိတ်ရှည်ပါ၊ သည်းခံပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကို စည်းလုံးရင် တစ်ခါတည်းနဲ့ ရအောင် စည်းလုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇွဲမလျော့ပါနဲ့။ တစ်လ၊ နှစ်လလောက်တော့ အချိန်ပေးရပါမယ်။ သူတို့ကို စည်းရုံးဖို့ စကားကို ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားပြီး ပြောဆိုစည်းရုံးရပါမယ်။
မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးကို စာတွေကို ဒီမိုမြန်မာဘလော့တွေက ကုလားကိုကြောက်ပြီး သူတို့ဆီပုံးတွေမှာ ရေးခွင့်မပေးပဲ ဘန်းကောင်း ဘန်းပါလိမ့်မယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့။ proxy တွေကို အသုံးပြုပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆောင်းပါးတွေရဲ့ comment မှာရေးပါ။ ဘလော့ပိုင်ရှင်က အရှက်ရအောင် ပြောဆို တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ဆုတ်ပေးသင့်လား? ဒီလိုပဲ . . နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဆီပုံးတွေ email တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်အပင်ပန်းခံနေပေမယ့် အသိအမှတ်ပြုမယ့်သူတွေ ရှိလာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ (လူတိုင်းက အသိအမှတ်ပြုတာကို ခုံမင်တာ သဘာဝပါ) ပင်ပန်းမှုတွေ၊ ရန်လိုမှုတွေ၊ နှိမ့်ချပြောဆိုခံရတာတွေ၊ အသိအမှတ်မပြုခံရတာတွေကို တိုင်းပြည်ကြီးအတွက် အရင်းအနှီးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲ သဘောထားပါ။ ကျနော်တို့ ရှေးမြန်မာ (ရခိုင်၊ကရင်၊ ရှမ်း၊ဗမာ အားလုံးပါဝင်ပါသည်) အဖိုးအဖွားတွေက အသက်တွေ ပေးစပ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲလောက်ကို မစွန့်လွတ်ရဲဘူးဆိုရင် ဟုတ်ပါ့မလား? အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးတွေကြောင့် နောက်မဆုတ်ပါနဲ့။ ကြိုးစားရင် အောင်မြင်မှာပါ။ ကျနော်တို့ ပြောတာကို အလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အမာခံ ၃ ယောက်ကလည်း ကျောင်းနဲ့ အလုပ်နဲ့ အချိန်အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ… အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ မော်လမြိုင်နဲ့ ဘူးသီးတောင် ဟာ ကုလား လက်အောက် ကျလုဆဲဆဲပါ
ကိုကြိုက်တယ်ရေ.. ခင်ဗျား မျှဝေမယ့် စာအုပ်လေးတွေကို scribd.com မှာတင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘလော့မှာ တင်ပေးချင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး တခြားဘလော့တွေကိုလဲ တင်ဖို့ စာရေးအကြောင်းကြားစေချင်ပါတယ်။ တင်ပေးတာ မတင်ပေးတာကတော့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ကျနော်တို့က ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အကုန်သုံးရမှာ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ?
ဒီမိုသမားတွေက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားသွားမှာ၊ မွတ်ဆလင်တွေကိစ္စကို အာရုံဏ်လွှဲသွားမှာ အင်မတန်ကို စိုး၇ိမ်နေပါတယ်။ သူတို့ ဒီမိုလှုပ်ရှားမှုကိုပဲ သိပ်ပြီးဂရုစိုက်စေချင်ရှာတယ်။ ဒီမိုကရေစီရမှ မွတ်ဆလင်ကိစ္စကို ဦးလှည့်စေချင်တဲ့ သဘောပါ။ လက်ရှိတော့ မွတ်ဆလင်တွေက မြန်မတိုင်းရင်းသူ၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ဗမာ တွေကို မယားငယ်လုပ်နေတာ လက်ပိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပဲ။ နိုင်ငံရေးသမား တွေဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး ဒီနေ့အထိ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရန်ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၆၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီရခဲ့ရင်လဲ ရန်ဖြစ်တာ ပြီးသွားမယ်ထင်သလား? KNU ၊ ABSDF ၊ စင်ပြိုင်အစိုးရ၊ အဖွဲ့တွေဟာ အခုဆိုရင် နှစ်ဖွဲ့ဆီ ကွဲပြဲကုန်ပြီး အဖွဲ့အရေအတွက် တိုးပွားလာတယ်မဟုတ်ပါလား? ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ် ပလီတက်ဆောက်တဲ့ အချိန်တောင် နိုင်ငံရေးသမား အဖိုးကြီးတွေ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတာကပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အသက်ကြီးခါးကုံးတာတောင် လိမ္မာဖို့ မစဉ်းစားတဲ့ သူတွေကို ကျနော်တို့ ဂရုစိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။ နောက်ပြီး တချို့က ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းလုပ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြောပြီးပါပြီး ယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင် ဆုံးမမှသာ ဘာသာရေးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး။ မုဒိမ်းကောင် မိုဟာမက်က ဘယ်လုပ်ပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် သွန်သင်မှာလဲဗျာ၊ မွတ်ဆလင်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်တာ ဘာသာရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ လူလိမ္မာနဲ့ လူရမ်းကားတွေ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ခင်ဗျား ဒီစာဖတ်ပြီးရင် သေခြာစဉ်းစားပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာ ဆင်းရဲပေမယ့် အေးချမ်းနေတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ မွတ်ဆလင်ဘာသာ လွှမ်းသွားရင် အဖတ်ဆယ်လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ လက်တွဲပါဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:09 AM
ကြိုက်တယ်ဟေ့ကိုဇော်မျိုးရေ.... ဆက်ချ..ဆက်ချ..တနေ့တလံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲပေါ့ဗျာ...တနေ့အောင်မြင်ရမှာပေါ့...ဆက်လုပ်ရဲဘော်..
ဒီမိုတွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ကုလားအကြောင်းပြောရင်၊ အစိုးရလူတွေက
ပြသနာဖြစ်အောင် လုပ်တယ်၊အာရုံလွှဲတယ် လို့ပြောသလို စစ်အစိုးရက ရဟန်းတွေကို
ရိုက်ခဲ့တာကို ပုံဖေါ်ရင်း ကုလားတွေက ဒီလောက်မဆိုးကြောင်း၊ ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းမှာ
ဘုန်းဘုန်းတွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းကြပါကြောင်း ဖြေရှင်းချက်တွေ ပေးကြပါတယ်။
မှားတယ်လို့ မပြောပါဘူး ဒါပေမယ့် တနေ့မှာ မွတ်တွေက ဒီအတွက် ဘာတွေကို အခွင့်အရေး
ယူကြမလဲ ခေါင်းတလှုပ်လှုပ် လည်တခါခါနဲ့ တောင်းဆိုကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြတာပေါ့၊
ဒီမိုမီဒီယာ ဆိုပြီးတော့ လှုပ်ရှားနေကြတော့လဲ မိမိကိုယ်တိုင် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်
အမှန်နဲ့ စတင် ကန့်ကွက်ရင် ဒီမိုလုပ်ပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားသူလို့
ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရမှာ ကြောက်ပုံရပါတယ်၊ နောက်ပြီး ကိုဇော်မျိုးပြောသလို
မွတ်စလင်ဒီမို သမားတွေရဲ့  သြဇာက ဘယ်လောက်ကြီးမားနေပြီလဲ မသိဘူး မထွေးနိုင်
မအန်နိုင် ဖြစ်နေကြရှာတယ်။ အချို့ သတင်းဌာန တွေကတော့ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်မဝေဖန်ပါဘူး၊
သတင်းသက်သက်ကို ဖေါ်ပြတာမို့ ဘာမှဝေဖန်စရာ မရှိပေမယ့် အချို့ သတင်းဌာနတွေကတော့
အမှားအမှန် သေချာမသုံးသပ်ပဲ ရိုဟင်ဂျာဘက်ကနေ ယောက်ဖကို ကြက်ဥတိုက်သလိုမျိုး
ဖြစ်နေပြီး ကုလားအကြောင်းကို စစ်အစိုးရကို တွယ်ရပြီးရော အနောက်ဘက်က အသံအတိုင်း
ထွက်ပေး ရေးပေးတာတော့ တိုင်းပြည် အနာဂါတ်အတွက် မကောင်းပါဘူး။
အခုခေတ်ကလည်း ၇ ရာစု ၈ရာစု မဟုတ်တော့ ဟိုတုန်းက လက်နက်နဲ့ အဓမ္မသိမ်းပိုက်၊
မိန်းမပျိုများကို သွေးနှော သားဖေါက်ပြီး သာသနာပြုတာမျိုး မရှိပေမယ့်၊
ကိုဇော်မျိုးရဲ့  ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် ခေတ်သစ် မွတ်အရီးကြီး သာသနာပြုနည်း
့ရမှာပါ။မူစလင်ဝါဒဟာ ဒီမိုကရေစီ ဝါဒနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တာကိုတော့
ဒီမိုသမားတွေ မေ့ထားကြပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း မစည်းလုံးကြရင်
မြန်မာပြည်မှာ သူတို့ရဲ့  သာသနာထဲကို မသိမသာနဲ့ ဝါးမြိုတာ ခံရလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ 
ဝါဒသာ ဝါးမြိုခံရ ရင်။မြန်မာပြည်မှာ မေတ္တာဓါတ်တွေ ဆိပ်သုဉ်းကုန်လိမ့်မယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာလည်းရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊
မိုဟာမက်ရဲ့  တပည့် ဘီလူးစီးတဲ့ ကျုးကျော်သူလူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့  သာသနာစုတ် ပေါင်းပြီး
ဖျက်စီးခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ အခု ၂၁ရာစု အီရန်နိုင်ငံဟာ အရင် အေဒီ ၅ရာစုက
ပါရှန်နိုင်ငံကို မမှီဘူးဆိုတာကို သမိုင်းပညာရှင်တွေက ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
မွတ်စလင်နိုင်ငံများ အားလုံးရဲ့  တရားစီရင်ရေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုန်အန်ကျမ်းကို
အခြေခံထားတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ တရားစီရင်တာကို လေ့လာရင် မွတ်စလင်
အချင်းချင်း တဦးနဲ့ တဦး၊တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ အယူအဆမတူတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဥပမာ
ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တူရကီ၊ မလေးရှား အစရှိတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အစ္စလာမ်
နိုင်ငံပါလို့ သူတို့ကိုသူတို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့  တရားစီရင်ရေးဟာ ကျန်
မွတ်စလင်နိုင်ငံ တွေရဲ့  တရားစီရင်ရေးနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာသာရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေး အနည်းငယ်
စည်းခြားထားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့  အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့
အဆင့်တန်းခွဲခြားတဲ့ မဟာပုရိသ ဝါဒကို သူတို့ ကုမ်အန်ပေါ် အခြေခံပြီး တရားစီရင်တဲ့
(Rape)ကာမ ဆော်ကားခံရမှုမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေ့ ရမှာပါ၊
အကယ်လို့ အမျိုးသ္မီး တစ်ယောက်ဟာ ကာမေသု ကျူးလွန်ခံရလို့ အစ္စလာမ်တရားရုံးမှာ
အမှုဖွင့်လိုလျှင် သူမဘက်က ဟုတ်မှန်ကြောင်း သက်သေ ၄ယောက်ရှိရပါမယ်။ သူတို့က
ကိုအမ်မှာပါတဲ့ အောက်ပါစာပုဒ်ကို ညွန်းတာပါ။
“Why did they not produce four witnesses? Since they produce not witnesses, they verily are liars in the sight of Allah”
(Qur’an 24:13; see also 24:4).
တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းက ကိုဇော်မျိုးပြောသလို Aisha က Safwan နဲ့ ဖေါက်ပြန်တယ်လို့
မိုဟာမက်ကို သူ့ လူတွေက တိုင်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်ကြားချက်ကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး
တိုင်ပြောတဲ့သူတွေကိုပဲ ကြိမ်ဒဏ် ၈၀ ပေးပြီး ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက်ကတော့ အမျိုးသားသက်သေ ၄ယောက် မပြည့်ဘူးဆိုပါတယ်
တကယ်လို့ သက်သေ ၄ယောက်လည်းရှိမယ် ပြစ်မှုလဲ ထင်ရှားမယ်ဆိုရင် ကျူးလွန်သူ
ရာဇဝတ်သားယောင်္ကျားဟာ အိမ်ထောင်ရှိ မရှိကြည့်ပါတယ် မရှိဘူးဆိုရင် ကြိမ်ဒါဏ်အချက် ၁၀၀
ပဲ အရိုက်ခံရပါတယ်၊ အိမ်ထောင်သည် ဆိုရင်တော့ ( အချို့ မွတ်နိုင်ငံတွေမှာ ကျောက်ခဲနဲ့
မသေမချင်း ပေါက်သတ်တဲ့ )သေဒါဏ်ပါ။ တကယ်လို့ ကာယကံရှင် အမျိုးသ္မီးဟာ သက်သေ ၄ယောက်
မပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ခေတ်မှီပြီး လစ်ဘရယ်ကျတဲ့ တဲ့ မွတ်စလင် နိုင်ငံတွေမှာတော့
ကံကောင်းပါတယ် ဆေးစစ်မှုတွေ စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ပါတယ် ပြီးရင် အပြစ်ပေးပါတယ် Taazeer
လို့ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကာယကံရှင် အမျိုးသ္မီးဟာ ကျူးလွန်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင် မတွေ
့ခဲ့ဘူးဆိုရင် တရားလိုကနေ တရားခံပြန်ဖြစ်သွားရတဲ့ အမှုတွေ မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှာ
ဘာသာတရားက တရားဥပဒေ အပေါ်ရောက်နေတာ တကြောင်း၊ (အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့
မွတ်နိုင်ငံတွေမှာ) အမျိုးသမီးတွေကို အဘက်ဘက်က ခြေသုတ်ပုဆိုးလို ကျွန်လို
နှိမ်ထားတာတကယ်ခံရတယ်။ အမျိုးသမီး တွေရဲ့  ပညာရေးကို လုံးဝအားမပေးပဲ ထားတာရယ်ကြောင့်
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဗဟုသုတ မရှိကြတာရယ်။ ကျူးလွန်သူတွေက အားနည်းတဲ့ ဘာသာရေးအခြေခံ
ဥပဒေကို လာဘ်ငွေနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူခြင်း၊တရားလိုက နေပြီး တရားခံ
ံပြန်ဖြစ်သွားမှာကို ကြောက်တာရယ် တွေကြောင့် မတရားမှုကို လက်လျှော့ရင်မဆိုင်တဲ့
အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိနေဆဲပါ၊ သူတို့က ကုလားဆန့်ကျင်တဲ့ မြန်မာတွေ သူတို့လူမျိုး ဘာသာ အပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ အမြင်မရှိကြဘူးလို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်၂၁ရာစု ရောက်နေတာတောင် ဒီမိုကရေစီနဲ့
မွတ်စလင်နဲ့ မတန်ပါဘူး ပြဒါးတလမ်း၊ သံတစ်လမ်းပါဗျာ၊
မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဘာတော့မှ ကောင်းလာမဲ့သူတွေ မဟုတ်...ယုတ်သထက် ယုတ်ညံ့ကြသောသူများသာဖြစ်သည်..
မွတ်ဆလင် ကင်းသော မြန်မာပြည် ဖြစ်
Thu Ya Phyoe Wai said...